उपत्यकामा मात्र १०८ ! देशैभर २८२ कोरोना संक्रमित आइसीयू र भेन्टिलेटरमा – hamrosandesh.com
उपत्यकामा मात्र १०८ ! देशैभर २८२ कोरोना संक्रमित आइसीयू र भेन्टिलेटरमा
देशभर हाल २८२ जना कोरोना संक्रमित अस्पतालको आइसियु र भेन्टिलेटरमा छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याकंले २१३ आइसियु र ६९ जना भेन्टिलेटरमा गरी २८२ जना बिरामी उपचाररत रहेको जनाएको छ। यसअघि शुक्रबार २३० जना संक्रमित आइसियु र भेन्टिलेटरमा थिए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा ६१ जना संक्रमित आइसियु र ४७ भेन्टिलेटरमा रहेका छन् । सोही अस्पतालहरुमा ४७१ जना आइसोलेसनमा रहेका छन् । शसस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बुमा १० आइसियु, ८ भेन्टिलेटर र ८७ जना आइसोलेसनमा छन्। श्री वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा ४ जना आइसियु र २९ जना आइसोलेसनमा, वीर अस्पतालमा ४ आइसियु, ३ भेन्टिलेटर र ३४ जना आइसोलेसनमा, नेपाल प्रहरी अस्पतालमा २ आइसियु र ५ भेन्टिलेटर र ३९ जना आइसोलेसनमा छन्।